Vhidhiyo: #Socialnomics 2014 | Martech Zone
Vhidhiyo: #Socialnomics 2014
#Socialnomics 2014 na Erik Qualman iyo yechishanu vhezheni yeanonyanya kutaridzwa mavhidhiyo akateedzana paSocial Media. Vhidhiyo yegore rino inoratidza huwandu hwakakomba pakati penzanga, nhare uye kuputika kwekushandiswa kwemireniyumu.
Hatina sarudzo yekuti tinoita zvemagariro here. Sarudzo ndeyekuti tinozviita nemazvo sei. Erik Qualman
Chinhu chakakosha pane izvi ndechekuti 20% yematemu akanyorwa mubhawa rekutsvaga haana kumbobvira atsvaga pamberi - kutsigira kudiwa kwechirongwa chakasimba chekushambadzira zvemukati panowisirwa zvinyorwa, mifananidzo, vhidhiyo, kushamwaridzana nevamwe nevamwe midhiya. Vatengesi vanofanirwa kunge vari kune vateereri vavo - uye izvo zvinoda chiyero uye zvakasiyana.
Erik Qualman ari # 1 anotengesa zvakanyanya munyori uye mutauri wekutaura pamusoro pehutungamiriri hwe digital. Vhidhiyo yacho yakagadzirwa naEqualman Studios. Kwayaka dhata yehuwandu hwehuwandu muvhidhiyo inowanikwa mubhuku reSocialnomics
Tags: eric qualmanyemagariro